महिना दिनभित्रैमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्दैछौं - Ekarmachari
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:३१
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कार्यरत छन् रामप्रसाद आचार्य । अर्थशास्त्र र जनप्रशासनको गहिरो अध्ययन गरेका उनी निजामती सेवामा प्रवेश गरेको तीन दशक व्यतित भइसक्यो । ०४६ सालमा जिल्ला खानेपानी शाखा कार्यालयबाट खरिदार पदबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी यो बीचमा कृषि विभाग , सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, झण्डै ७ बर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला समन्वय समिति, गैँडाकोट नगरपालिका हुँदै अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा कार्यरत छन् ।
कोरोनाको दोश्रो लहर रोकथाम र नियन्त्रणमा सबैभन्दा बढी सक्रिय देखिएका छन् । यस्तो स्थितीमा आचार्यसँग गोकर्णेश्वर नगरमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र यसको सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा भएका कार्यमा केन्द्रित रही इकर्मचारी डटकमले केही कुराकानी गरेको छ :-
नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नागरिक सचेतना, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा उच्च जोड दिएका छौं । झण्डै एक वर्षभन्दा बढी हामीले कोभिड–१९ बीच बित्यो । जस्तोसुकै कठिन समयमा पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जनताको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई बन्द गरेन । गत वर्ष पनि कोभिड संक्रमितहरूका लागि आइसोलेसन र सम्भावित संक्रमणलाई रोक्न घर, होटल र नगरपालिकाको छुट्टै क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्था गरी आवश्यक सेवा प्रदान गरेको थियो । कोभिडको दोस्रो लहर अत्यन्त घातक देखिएको छ । समुदायमा कोभिड संक्रमणलाई रोक्न समयमै नगरपालिकाले माइकिङ गर्ने, क्लोरिन र चुना छर्ने, टोलटोलमा साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था र सरसफाइलाई जोड दिँदै आएका छौं ।
अक्सिजनको व्यवस्था सहित खाने, बस्ने र डाक्टरको सेवासहितको आइसोलेसन बनाएका छौं । मनोपरामर्श सेवा पनि सुरु गरेका छौं । मास्क, सेनिटाइजर वितरण, सचेतनामुलक कार्यक्रम पनि गरेका छौं । अक्सिजन प्लान्ट राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । अक्सिजन कन्सन्टेटर २५ वटा उपलब्ध गराएका छौं । भेन्टिलेटर नभएका अस्पतालमा हामीले उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छौं ।
पालिकाले कोभिड विरुद्ध भ्याक्सिन लगाउन सहजिकरण गर्दै आएका छौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका ४ स्थित राष्ट्रिय शहिद तथा शान्ति पार्क,यज्ञडोल (जगडोल)मा डाक्टर ,अक्सिजन ,थेरापी , एम्बुलेन्स सहितको २५ शैया आईसोलेसन निर्माण गरेका छ । यहाँबाट धेरैले लाभ पनि लिइ सक्नु भएको छ । खाङ्ग्री अस्पतालमा हामीले आइसोलेसन निमार्ण गरेका छौं । क्वारेन्टाइन भने हामीले बनाएका छैनौं
कोरोनाको अवस्था कस्तो छ ? संक्रमित कती छन् ?
नगरपालिकाभित्र हालसम्म २ हजार ८सय ८१ जनामा कोरोना संक्रमण पृष्टि भएको छ । १ हजार ५ सय ३२ पुरुष र महिला १३ सय ५८ जना रहेका छन् । जसमध्य २१४५ जना निको भएका छन् । जसमा ११४१ जना पुरुष र १००४ जना महिला छन् । त्यस्तै ४४ जनाको मृत्यु भएको छ जसमा २५ जना पुरुष र १९ जना महिला रहेका छन् । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ सय ६७ पुरुष र ३ सय ३५ महिला गरी ६७२ होम आइसोलेसनमा छन् भने २१ जना हस्पिटल आइसोलेसनमा छन् ।
नगरपालिकाले एनटेजिन विधिबाट ९ सय ८३ र ४ हजार जनाको पिसिआर परिक्षण गरेका छौं ।
प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:३१ June 9, 2021 २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १५:३१